ဂရိမှာ စီးပှားရေး အငျပါယာကွီးတဈခု တညျဆောကျနတေဲ့ Lindsay Lohan – SoShwe
Home/Entertainment/ဂရိမှာ စီးပှားရေး အငျပါယာကွီးတဈခု တညျဆောကျနတေဲ့ Lindsay Lohan
ဂရိမှာ စီးပှားရေး အငျပါယာကွီးတဈခု တညျဆောကျနတေဲ့ Lindsay Lohan
admin5days ago	Entertainment Leaveacomment
လငျဆေးလိုဟနျရဲ့ Mykonos မှာရှိတဲ့ Beach Club ဟာ အခုဆို တရားဝငျ ဖှငျ့လှဈလိုကျပွီဖွဈပွီး သူမအနနေဲ့ ဂရိမှာ စီးပှားရေးအငျပါယာကွီးတဈခု တညျဆောကျရနျ ကွိုးပမျးလကျြရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဂရိနိုငျငံ အသေငျမွို့မှာ Night Club တဈခု ပိုငျဆိုငျသလို ရို့ဒျမွို့မှာလညျး ပငျလယျကမျးခွေ အပနျးဖွစေခနျးတဈခုကို ဖှငျ့လှဈထားပါတယျ။ ၂၀၀၇ ခုနှဈကနေ စတငျပွီး လငျဆေးအနနေဲ့ ဂရိမှာ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ စတငျလုပျဆောငျလာခဲ့ပုံတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ပငျလယျကမျးခွေ အပနျးဖွစေခနျး
Lohan Mykonos ဆိုတဲ့ Beach Club ကို ကာလိုလီဗာဒီ ကမျးခွမှော တညျဆောကျခဲ့ပါတယျ။ Website တဈခုမှာ ဖျောပွခကျြအရ “ Lohan Mykonos ကမျးခွအေပနျးဖွကေလပျဟာ သဘာဝအလှတရားတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနပွေီး စိတျကူးယဉျဆနျဆနျ တညျဆောကျထားခွငျးဖွဈပါတယျ . . . ” ဆိုပွီး ရေးသားဖျောပွထားပါတယျ။
50 shades of Mediterranean blue andaluxury sunbed for you and who? . . . . . #lohanmykonos #lohanbeachhouse #mykonos #mikonos #mykonosisland #mykonosgreece #mymykonos #mykonoslife #mykonos2018 #mykonos_vacation #mykonoslifestyle #beachbar #beachbars #beachclub #beachclubs #beachparty #mykonosbeach #beach #beachday #beachlife #beaches #luxurylife #luxurylifestyle #luxuryliving #luxurystyle #luxurygoods #luxurious #luxurydestination #travelgram #travelingram
A post shared by Lohan Beach House Mykonos (@lohanmykonosofficial) on Jun 25, 2018 at 1:00am PDT
Lohan Beach House မှာလညျး စားသောကျဆိုငျပါရှိပွီး မွထေဲပငျလယျနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ အစားအစာတှကေို မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ အရသာလေးတှနေဲ့ ပေါငျးစပျထားသဖွငျ့ စားသုံးသူတှကေို စိတျကနြေပျမှု ပေးစှမျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့သငျဟာ သကျသကျလှတျစားသုံးတဈဦးဆိုရငျတော့ ၂၅ ဒျေါလာကနေ ၇၅ ဒျေါလာအတှငျး သငျ့စိတျတိုငျးကြ သုံးဆောငျလို့ရပါတယျ။
Treat yourself to unexpected flavour combinations. A new world of food awaits at Lohan Beach House Mykonos. . . . . . #lohanmykonos #lohanbeachhouse #mykonos #mikonos #mykonosisland #mykonosgreece #mymykonos #mykonoslife #mykonos2018 #mykonosparty #mykonos_vacation #mykonoslifestyle #beachrestaurant #gastronomy #restaurants #restaurant #restaurantlife #restaurantmykonos #luxurylife #luxurylifestyle #luxuryliving #luxurystyle #luxurygoods #luxurious #luxurydestination
A post shared by Lohan Beach House Mykonos (@lohanmykonosofficial) on Jun 17, 2018 at 4:16am PDT
၃။ အမှတျတရ လကျဆောငျပစ်စညျးဆိုငျ
ကော့တေးအနညျးငယျသောကျပွီးနောကျ အင်ျဂလနျစတိုငျ အပွငျအဆငျအခမျးအနားနဲ့ လငျဆေးရဲ့ အမှတျတရ လကျဆောငျပစ်စညျးဆိုငျမှာလညျး ဝငျရောကျကွညျ့ရှုပွီး လကျဆောငျပစ်စညျးတှေ ဝယျယူလို့ရပါတယျ။
Did you forget anything? All that’s left behind should stay there. Shop the new summer trends at Sotris boutique. . . . . . #lohanmykonos #lohanbeachhouse #mykonos #mikonos #mykonosisland #mykonosgreece #mymykonos #mykonoslife #mykonos2018 #mykonosparty #mykonos_vacation #mykonoslifestyle #luxurylife #luxurylifestyle #luxuryliving #luxurystyle #luxurygoods #luxurious #luxurydestination
A post shared by Lohan Beach House Mykonos (@lohanmykonosofficial) on Jul 9, 2018 at 2:00am PDT
၄။ အညောငျးအညာပွစေရေနျနှငျ့ အပနျးဖွအေနားယူနိုငျရနျ ဖှငျ့လှဈထားသော အနှိပျခနျး။
ပငျလယျကမျးခွသေို့ အပနျးဖွလောရောကျသူမြား အဆငျပွနေိုငျအောငျ ရညျရှယျပွီး ဖှငျ့လှဈထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
လငျဆေးအနနေဲ့ Lohan Beach Club အပွငျ အခွားစီးပှားရေးတှလေညျး ရှိသေးတာကွောငျ့ အလုပျမြားနမှော ကြိနျးသပွေီး သူမရဲ့ အပနျးဖွကေလပျမှာ အခြိနျပွညျ့ရှိနနေိုငျမယျ မထငျပါဘူး။ သို့သျောလညျးပဲ သူမရဲ့ Instagram Story တှမှောတော့ သူမရဲ့ အပနျးဖွကေလပျမှာ အခြိနျကုနျဆုံးနတေဲ့ပုံတှကေို အမြားဆုံး တှမွေ့ငျရမှာဖွဈပါတယျ။
ဂရိမှာ စီးပွားရေး အင်ပါယာကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်နေတဲ့ Lindsay Lohan
လင်ဆေးလိုဟန်ရဲ့ Mykonos မှာရှိတဲ့ Beach Club ဟာ အခုဆို တရားဝင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး သူမအနေနဲ့ ဂရိမှာ စီးပွားရေးအင်ပါယာကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဂရိနိုင်ငံ အေသင်မြို့မှာ Night Club တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်သလို ရို့ဒ်မြို့မှာလည်း ပင်လယ်ကမ်းခြေ အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကနေ စတင်ပြီး လင်ဆေးအနေနဲ့ ဂရိမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ စတင်လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပုံတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ပင်လယ်ကမ်းခြေ အပန်းဖြေစခန်း
Lohan Mykonos ဆိုတဲ့ Beach Club ကို ကာလိုလီဗာဒီ ကမ်းခြေမှာ တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ Website တစ်ခုမှာ ဖော်ပြချက်အရ “ Lohan Mykonos ကမ်းခြေအပန်းဖြေကလပ်ဟာ သဘာဝအလှတရားတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
Lohan Beach House မှာလည်း စားသောက်ဆိုင်ပါရှိပြီး မြေထဲပင်လယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အစားအစာတွေကို မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အရသာလေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားသဖြင့် စားသုံးသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာ သက်သက်လွတ်စားသုံးတစ်ဦးဆိုရင်တော့ ၂၅ ဒေါ်လာကနေ ၇၅ ဒေါ်လာအတွင်း သင့်စိတ်တိုင်းကျ သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်။
၃။ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်
ကော့တေးအနည်းငယ်သောက်ပြီးနောက် အင်္ဂလန်စတိုင် အပြင်အဆင်အခမ်းအနားနဲ့ လင်ဆေးရဲ့ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာလည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။
၄။ အညောင်းအညာပြေစေရန်နှင့် အပန်းဖြေအနားယူနိုင်ရန် ဖွင့်လှစ်ထားသော အနှိပ်ခန်း။
ပင်လယ်ကမ်းခြေသို့ အပန်းဖြေလာရောက်သူများ အဆင်ပြေနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လင်ဆေးအနေနဲ့ Lohan Beach Club အပြင် အခြားစီးပွားရေးတွေလည်း ရှိသေးတာကြောင့် အလုပ်များနေမှာ ကျိန်းသေပြီး သူမရဲ့ အပန်းဖြေကလပ်မှာ အချိန်ပြည့်ရှိနေနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ သူမရဲ့ Instagram Story တွေမှာတော့ သူမရဲ့ အပန်းဖြေကလပ်မှာ အချိန်ကုန်ဆုံးနေတဲ့ပုံတွေကို အများဆုံး တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous ကနျြးမာရေးအတှကျ တှဲဖကျစားသုံးသငျ့သော အစားအစာမြား။
Next မွငျးစီးပွိုငျပှဲမြားမှတဈဆငျ့ ဒျေါလာ (၉) သနျးကြျောရှာဖှနေိုငျခဲ့တဲ့ အဲလဈဇဘကျဘုရငျမကွီး။